सिन्डिकेटको सकसमा समाज
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक समृद्धिपछि बढी प्रयोग भएको शब्द हो ‘सिन्डिकेट’ । हुन त यो शब्द विगत एक दशकदेखि नेपाली जनताले फाट्टफुट्ट सुन्दै आएका छन् । कहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको सिन्डिकेट, कहिले माओवादी र कांग्रेसको सिन्डिकेट र कहिले एमाले र माओवादीको सत्ताको सिन्डिकेट नेपाली जनताले भोग्दैछन् । सत्तामा सिन्डिकेट, नियुक्तिमा सिन्डिकेट, विदेश भ्रमणमा जाँदा सिन्डिकेट, सुनको आयात तथा बिक्रीमा वाणिज्य बैंकहरु र सुनचाँदी व्यवसायीसंघको सिन्डिकेट, सञ्चार माध्यममा सिन्डिकेट, सिनेमामा सिन्डिकेट, यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट, औषधिको व्यापार क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट, पट्रोललियम पदार्थको क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट त्यति मात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेतले त मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । सबैतिर सिन्डिकेट र कार्टेलको विगविगी छ । मानौं यो देश सिन्डिकेटले चलिरहेको छ ।
सिन्डिकेटको अर्थ हो– आलोपालो, एकाधिकार, मनोमानी, कार्टेल भन्ने हुन्छ  । आम जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हाम्रा प्रायः हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–परोक्ष एकाधिकार, मनोमानी तथा सिन्डिकेट चलेको छ । जन्मेदेखि मृत्युसम्मका हरेक घडीमा सिन्डिकेटको जालो छ । यतिसम्म सिन्डिकेट बलवान् छ कि मानिसको मृत्युपश्चात् ब्रह्मनालको चिर निद्रामा पुग्दा पनि सिन्डिकेटले छोडेको देखिँदैन । लासलाई जलाउन प्रयोग गरिने समानहरु पनि सिन्डिकेट धारीहरुसँग किन्नुपर्दछ । यो सिन्डिकेटको जालो कहिले पूर्णरुपमा तोडिने हो यसै भन्न नसकिने अवस्थामा छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकार केही हदसम्म सफल भएको छ । विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकाले कत्तिको आँट गर्छ त्यो भावी दिनले बताउनेछ । तर, यो पङ्क्तिकारलाई सबै क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य सरकाले गर्ला भन्ने कुरामा कमै विश्वास छ । निजी क्षेत्रबाट चल्ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य लगानीमा कतिपय सत्ता चलाउने नेताहरुको लगानी भएको हुँदा ती क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुरामा प्रशस्त शंका छ । सिन्डिकेट कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि सिन्डिकेट कुन क्षेत्रमा छैन भनेर खोज्नु जरुरी छ । अहिलेको सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको चेन चुँडाल्न केही हदसम्म सफल भएको छ । मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रको सिन्डिकेटको तुलना गर्ने हो भने यो एक प्रतिशत मात्रै सफलता हो । अझै ९९ प्रतिशत सिन्डिकेट चुँडाल्न बाँकी नै छ । तर, अहिलेको ओली सरकार ९९ प्रतिशत सिन्डिकेट चुँडाले झैं गरी प्रचारबाजी गरिरहेको छ । काम सम्पन्न गरिसकेपछि प्रचार गर्नु स्वाभाविक हो तर त्यसको विपरीत हुन गएको छ । यो देश कसले सञ्चालन गरिरहेको छ ? यो देशमा जसले जे गरे पनि हुने हो त ? अस्पतालहरु किन सेवा क्षेत्रको रुपमा अघि बढिरहेका छैनन् ? शिक्षा क्षेत्र किन व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास भएको छ ? कुनै पनि निर्माणसम्बन्धी परियोजना किन समयमै सम्पन्न हुँदैन ? विकास निर्माणका कामहरु किन गुणस्तरहीन हुन्छन् ? किन पुँजीगत खर्च समयमै सदुपयोग हुँदैन ? गहनरुपमा नियाल्ने हो भने यो देश सिन्डिकेटको जालोमा रुमल्लिएको अवस्थामा छ । यत्रतत्र सिन्डिकेट छ । इमानदरलाई खरिद गर्ने शक्तिहरु सर्वत्र छन् । प्रशासनिक निकाय सिन्डिकेटको सर्वोच्च अंगको रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा छ । अनि कसरी हुन्छ सिन्डिकेटको अन्त्य ?
यातायात क्षेत्र आम जनताको अत्यन्त सरोकार भएको क्षेत्र हो । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले अघि सारेका हरेक नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरु अन्नत सहमत भएका छन् । राज्यको कानुन भनेकै हामी हौं भनेर वर्चस्व देखाएकाहरु अहिले सरकारको पछिल्लो कदमले अलिकति भए पनि झस्किएका छन् । आम नेपाली जनताले आशा गरेका छन् कि अब १४/१५ जना सिट भएको माइक्रोमा २८/३० जना कोचिएको देख्न नपाइएला कि ? या ३२/३४ जनाको सिटको बसमा ७०/७५जना भेडाबाख्रा जस्तो कोचिएर यात्रा गर्नु नपर्ला कि ? सबै क्षेत्रका यातायातका साधनहरु राज्यको करको दायरामा आउलान् कि ? सडकलाई पुरै धुवैँधुवाँले ढाक्ने पुराना गाडी सञ्चालन भएको देख्न नपाइएला कि ? मिटरमा हिँड्ने ट्याक्सीले मनोमानी भाडा नलेला कि ? परिचयपत्र भएका विद्यार्थी तथा जेष्ठ नागरिक र अपांता भएका व्यक्तिले भाडामा छुट सजिलै पाउलान् ? कार्यन्वयन पक्षमा सरकारले पुनः ध्यान नदिने हो भने यी माथिका सेवाबाट पुनः आम नागरिक वञ्चित हुने निश्चित छ ।
यातातायात क्षेत्र जस्तै अरु क्षेत्रको सिन्डिकेट पनि कम भयावह छैन । बैकिङ क्षेत्रमा पनि अझै सिन्डिकेट छ । बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक बैठक गरी मुद्दति निक्षेपमा वार्षिक ११ र बचत खातामा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने पुरानो सहमति यथावत् राखेका छन् । यो सिन्डिकेटको निरन्तरता हो ।
बैंकिङ प्रणलीमा लगानीयोग्यको पुँजी अभावपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउने क्रममा कुनै बैंकले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप तानेको भोलिपल्टै अर्कोले ११ दशमलव ५० प्रतिशत र तेस्रो दिन १२ प्रतिशत ब्याज दिने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । दुई सातापछि एकपछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढाउँदै १३ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म पनि तिनले पु-याएका थिए । मुद्दति र बचतको ब्याज दर बढाउँदै जाँदा कति ब्याजमा लगानी गर्ने भन्ने समस्या आउने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दति निक्षेपमा ११ र बचतमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन अंकुश लगाइनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । यो बैंकिङ सिन्डिकेटको जालो हो ।
विद्यालयतर्फ हेर्ने हो सिन्डिकेटको जालो भयावह छ । धेरै स्कुलहरुमा बर्सेपिच्छे भर्ना शुल्क असुलिन्छ । ट्युसन फी र अन्य अतिरिक्त शुल्कहरु पनि विभिन्न बहानामा उठाइन्छ । सरकारको पाठ्यक्रम र प्रश्न पत्र एउटै हुन्छ । तर, विद्यार्थीलाई फरकफरक किताब पढाइन्छ । प्याब्सन र एन प्याब्सनलगायतका संस्थले किताबको व्यापार गर्न प्रकाशन गृह पनि आफैं खोलेका छन् । किताब मात्र होइन विद्यार्थीलाई चाहिने अन्य स्टेशनरी सामान र ड्रेसहरु पनि चर्को मूल्यमा अभिभावकहरुलाई किन्न बाध्य गराइन्छ । यो सिन्डिकेटको चक्र कहिले तोडिने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । अरुको त के कुरा गरौं कृषकहरु पनि विषादी मिलाएको तरकारी उत्पादनको सिन्डिकेट सञ्चालन गरेर बसेका छन् । बिक्रेताहरुले भने कृषकबाट किनेको मूल्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न अलग्गै सिन्डिकेट सञ्चालन गरेका छन् । निजी अस्पतालहरुमा भर्ना शुल्क, डाक्टरहरुको शुल्क, प्रयोगशाला परीक्षणदेखि औषधिसम्मको सिन्डिकेट छ । यतिसम्म कि एमआरपी मूल्यभन्दा दुई हजार २०० सय प्रतिशतभन्दा बढी औषधिका मूल्य लिने गएको रेकर्ड पनि पाइएको छ । अर्कोतिर निर्माण सामग्री कम्पनीहरुको पनि ठूलो सिन्डिकेट छ । दुःखको बचतबाट तथा बैंकको ऋणबाट घर बनाउन तयार सर्वसाधारणले निर्माण साम्रगी उचित मूल्यमा किन्न पाउँदैनन् । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट, डन्डी र रङको माग भएको बेला सहुलियत दरमा बेच्नुको सट्टा दुवै वस्तु उत्पादक संघले मूल्य बढाए । त्यस्तै गिटी, ढुंगा तथा इँटाको मूल्यसमेत सम्बन्धित संघले तोक्ने गर्छन् । कसैले तोकिएभन्दा सस्तो मूल्यमा बेचेको थाहा पाएमा संघले नै त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही समेत हुने गरेको छ । नेपाल ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायी महासंघ र त्यसअन्तर्गत ५० हजारभन्दा बढी ट्रक ट्यांकर आबद्ध छन् । जसबाट महासंघ प्रतिमहिना एक करोडभन्दा बढी उठाउने गर्छन् । यिनीहरुले चक्रीय प्रणाली लागू गरी मनलाग्दो भाडा तय गरेका छन् । यो कस्तो विडम्बना हो ।
आज अधिकांश युवाहरु कामको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । हरेक दिन १५०० सयको हाराहारीमा नेपाली युवाहरुले एयरपोर्ट छोड्ने गर्दछन् । विदेश जान वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघको नाममा पनि सिन्डिकेटको ठूलो दबदबा छ । सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटमा युवालाई विदेश पठाउने भनेर घोषणा गरेको छ । तर, खाडी मुलुकमा अति नै संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा पनि लाखौं असुलिन्छ र दस हजारको मात्र भर्पाइ गराइन्छ । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तालिमदेखि भिसा प्रोसेसिङसम्म सिन्डिकेट धारीहरुले ठग्ने गरेको कुरा सर्वत्र देख्न पाइन्छ । सिन्डिकेट र कार्टेल हाम्रो मात्र समस्या नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कै रुपमा जोडिन पुगेको छ । आज विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकमा सिन्डिकेट तथा कार्टेल गर्नेलाई फोजदारी अपराधको रुपमा लिई कडा सजाय दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै पाँच दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा पनि उपभोक्ताहित संरक्षण सम्बन्धित कानुनहरु छन् । मार्गन लुइसको २०१७ ग्लोबल कार्टेल इन्फोर्समेन्ट रिर्पोटको अनुसार सन् २०१७ मा विश्वभरि चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर जरिवाना गरिएको थियो । अरु देशको तुलनामा हाम्रो देशमा सिन्डिकेट तथा कार्टेल गर्नेलाई जरिवाना र सजाय निकै फितलो छ । सिन्डिकेट गर्नेलाई एक वर्ष कैद र एक हजारसम्मको जरिवाना भनिएको छ । उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्नेहरुलाई यस्तो जरिवाना र सजायलाई परिमार्जन गरी कडा सजाय र बढी जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा सिन्डिकेट तथा कार्टेलको जरैदेखि उन्मुलन गर्न कठिन छ । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले खुला बजार तथा उदारवादी प्रणालीको सिद्धान्त अँगाल्छ । यस्तो अर्थव्यवस्थामा अदृश्य हात अर्थात् इन्भिजिवल ह्यान्डले अर्थतन्त्र चलाउँछ । खुला बजार तथा उदारवाद प्रणालीले आर्थिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा खासै हस्तक्षेप गर्दैन । व्यक्तिलाई आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । तसर्थ यस्तो व्यवस्थामा सिन्डिकेट तथा कार्टेलधारी हरुले आम सर्वसाधारण जनतालाई सिन्डिकेटको माध्यमबाट जनतालाई ठगिरहेका हुन्छन् । मुलुकमा सिन्डिकेट तथा कार्टेलको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने हो भने राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अर्थात् समाजवादी अर्थव्यवस्था आवश्यक पर्दछ । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र सिन्डिकेट तथा कार्टेलको अन्त्य गर्दछ । यस्तो व्यवस्थामा व्यक्तिले समाजको लागि कार्य गर्दछ र समाजले अर्थात् राज्यले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्दछ । जब राज्यले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्दछ तब उसलाई सिन्डिकेट तथा कार्टेलको माध्यमबाट धन आर्जन गर्नुको जरुरत हुँदैन ।